ခိုင်နုငယ်: June 2010
မနေ့က အလုပ်ကနေအိမ်အပြန်ဆယ့်ငါးမိနစ်သာလျှောက်ရသောလမ်းမှာ "မလေး...နက်ဖန်မမမွေးနေ့"
ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုလိုရပ်ဝေးမြေခြားရောက်နေတဲ့ သမီးတွေအတွက်အပါတ်စဉ်မွေးရက်ရောက်တိုင်းဆွမ်းချက်ကာကုသိုလ်
မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းအမှတ်တရလေးသူ့အတွက်ရေးချင်မိတာ ကဗျာမမှီ၊စာမပီရေးဖွဲ့ပြီးချိန်မှာည (၁၂)နာရီထိုး
နေပါပြီ။ဒါနဲ့မမမျက်နှာလေးကိုဟက်ပီးဘက်ဒေးဆိုပြီးငုံ့ကာအနမ်း( :) အရှောင်ကောင်းလို့ မျက်နှာနဲ့လက်ဝါးနည်း
တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အဖုအထစ်လေးတွေနဲ့ပဲနားလည်မူ့ကိုရယူနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူချစ်သောမိတ်ဆွေများအ
တွက်ဘက်ဒေးအကျွေးအမွေးဧည့်ဝတ်မကျေနိုင်တာ ခွင့်လွတ်ပါနှော်။:) :) :)
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:14 PM 18 comments: Links to this post
ရှေးစာဆို * ရှင်ငြိမ်းမယ်*
ဒီစာစုလေးကို အခြေပြုပြီး ဒါရိုက်တာမောင်သီကလည်း တိမ်ခိုးငယ်...ဝေဆိုပြီး
ထောင်တဲ့စကားရယ် (ရီ) ပေါ့ဆိုတာလိုအချိန်အခါနေရာမကြည့်ပဲစနောက်တတ်တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်
နေမိသေးတယ် :) အအိပ်မက်တာကအဲလို မနက်အိပ်ယာထကျွန်မရဲ့နိုးစက်အမတော်ကအတင်းဇွတ်နိုးကာ
ခုတလောလကုန်ရက်မို့အရင်လိုအလုပ်ကနေလစ်ရင်လစ်သလိုစာရေးရအောင်ကလည်း ရေးဖို့ကိုအချိန်မပေးနိုင်ပေမယ့်၊ ဘလောပ့်မိတ်ဆွေတွေအသစ်တင်ရင်ဖြင့်အရောက်သွားလို့ဖတ်မိတာ။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 12:41 AM6comments: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 7:03 PM4comments: Links to this post
ဘုရား တ,ရင်း စိန်ခေါ်ခဲ့ရပြီ။
ဣနြေ္ဒကြီးတဲ့ ကောင်းကင်လို နေလိုက်ပေါ့။ ။
မာယာမဂ္ဂဇင်း၊ မတ်လ၊ ၁၉၉၈၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁ မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆရာမဂျူး၏
Posted by ခိုင်နုငယ် at 6:38 PM 11 comments: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 1:26 AM 11 comments: Links to this post
ကျွန်မတို့နေတဲ့ ၁၇လွှာတိုက်ခန်းဆီကနေ မြေညီထပ်ကိုဓါတ်လှေကား (Lift )နှင့်တက်ရဆင်းရပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ အလုပ်သွားဖို့ ကျွန်မနေတဲ့တိုက်ခန်းဆီကနေ မြေညီထပ်ကိုဆင်းတော့။
သူ့လက်ထဲမှာပစ္စည်းလေးနှစ်ခုကို ကိုင်လာတာမို့ ကျွန်မလည်းအမူ့မဲ့ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်။
ထိုကလေးငယ်လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာက လက်ကိုင်ဖုန်းလေးနှင့်ဂိမ်းဆော့တဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။
ဒီနိုင်ငံမှာ ဆယ်နှစ်၊ဆယ့်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေ ဖုန်းကိုင်တာအထူးတဆန်းတော့
ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းနေတာက ကျွန်မ။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မအတွေးတွေကတောင်စဉ်ရေမရထွက်
လာတော့တာပဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံကကလေးတွေ ဒီလိုဖုန်းမျိုးမပြောနှင့်ဖုန်းနှင့်တူတဲ့ကော်ပတ်ရုပ်
ဟုတ်တယ်လေ။ ကျွန်မတောင်လက်ကိုင်ဖုန်းဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာမြင်ပဲမြင်ဖူးခဲ့တာ မသုံးခဲ့ဖူးပါဘူး။
သုံးနှစ်ရှိပြီဒီဖုန်းစုတ်ကလေးကိုပဲ ကာဘာcover ပြန်လဲလိုက် စုတ်သွားလိုက် ပြန်လဲလိုက်နဲ့
အကောင်းစားဖုန်းတွေကတော့ ထောင်ဂဏန်းထိရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနိုင်ငံမှာကတစ်ရာတန်
မည်သူမှအမထင်မကြီးကြပါဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုလုပ်၊ကိုယ့်အစားကို စား၊ ကိုယ့်ခရီးကိုသွား
ဒါနဲ့ကျွန်မတွေးနေမိတာလေးက ကျွန်မတို့တွေလူချင်းတူပြီး လူ့အခွင့်အရေး(Opportunity)
ဒါပေမယ့်ဒီနိုင်ငံမှာက ကလေးကလည်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အရေး၊လူကြီးကလည်း လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးရှိနေကြတာပဲ။
ကြွက်နဲ့တောတိုးတော့တာပဲ။ ကြွက်ဆိုတာကျွန်မတို့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံလေးမှာက ရဲကို
နှစ်ကောင်းသားဖင်တပြန်ခေါင်းတစ်ပြန်စစ် ကြည့်ပြီး “အိုကေ”လို့ပြောပြီးကဒ်ကလေးပြန်
ပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုအစစ်ခံရပေမယ့် သူ့ကျောင်းနေသူ့စာအံဆိုတာလို သူ့တို့ကို
ဒီလိုကြုံတွေ့နေရတာက တစ်ရံတစ်ခါတင်မဟုတ်ဖူး။ နိစ္စဓူဝဆိုတာလို အလုပ်နှင့်
police station နဲ့ကကပ်ရပ်နေ့တိုင်းလိုဒီမျက်နှာမြင်တွေ့နေရလည်းတွေ့ရင်
“သြော် ရှင်တို့ကရဲတွေကိုး” ဆိုတာလိုပဲ သူတို့နိုင်ငံ သူတို့လုပ်ရမဲ့တာဝန်မို့ စစ်တာဆေးတာ
သူတို့အလုပ်မို့အပြစ်မဆိုချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ခက်တာက စစ်ကာဆေးကာနဲ့တင်တစ်ချို့ကြွက်
စုတ်များကမပြီးနိုင်ဘူး ရစ်နေတတ်ပြန်သေးတယ်။ တစ်ချို့ကြူတတ်တဲ့ကြွက်စုတ်နဲ့တွေ့ရင်
ဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရတဲ့ခါ ကျွန်မတစ်ခါတစ်လေတွေးမိတယ်။ သမီးတွေကိုမျက်စိ
ကျွန်မတို့အဖေဟာ သမီးမိန်းကလေးမွေးထားခဲ့ပေမယ့် ဖာသည့်ဖာသာမနေခဲ့ဘူး။
သမီးတွေကိုနည်းစနစ်ကျကျ ၀တ်တာစားတာအနေအထိုင်ကအစ အမေ့ထက်အဖေကပိုပြီး
သင်ပြပေးခဲ့သူ။ ကျွန်မတို့တွေနယ်မှာကြီးပြင်းခဲ့ကြသူတွေမို့ အလုပ်နားရက် ဟိုအိမ်ဒီအိမ်
“မိန်ကလေးဆိုတာ ကိုယ့်အိမ်ကကြူးရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး” ဆိုပြီးစာအုပ်၊စာပေ
တဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ထရတယ်၊၊ ထလို့မလုံလောက်ပြန်တော့ လမ်းလျှောက်ရပြန်တယ်။
ကျွန်မတို့တွေ ဘ၀ကိုအဲဒီလို ရေကြည်ရာမြက်နုရာရေလိုက်သင့်ငါးလိုက်သင့်ဖြတ်သန်းနေ
ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆို ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ ရေခံ၊မြေခံကောင်းပါလျှက်ကယ်နှင့် အရိပ်အာဝါသ
ရွှေအမြုတေနိုဝင်ဘာလထုတ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာနေဇင်လတ်က သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ကာလ
တစ်ခုရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသုတအဖြစ် “အချိန်တစ်ခုကို နားလည်ခံစားခြင်း”ဆိုပြီး ချပြထားတာ
မှာပါတဲ့အာဏာရအိန္ဒိယကွန်ဂရက်ပါတီမှ ရာဟူးရ် ဂန္ဒီရဲ့ပြပြုပြောင်းလဲရေး အဆိုမိန့်လေး
“ဆင်းရဲချမ်းသာ မညီမျှမူ့ထက် အရေးပိုကြီးတာက လူတိုင်းအခွင့်အရေးရနိုင်ကြဖို့ပဲ”
မရှိတဲ့ ကာလမျိုးနဲ့မျိုးဆက်သစ်တို့ဝေးပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။ စင်ကာပူက ၀ါရင့်ဂိုချုပ်ထောင်မှတ်ချက်ပြုသွားတာလေးဘမောင်သတိပြုလိုက်ရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကို ရလိုက်ရင် ဆယ်နှစ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးလာပြီး
အားရှိစရာအတော်ကောင်းပဲ။ ဘမောင်တို့အသက်အရွယ်မျိုးဆက်တွေမှာ အဲဒီလိုတိုးတက်
နိုင်မူ့ကိုမြင်ရဖို့ အလှမ်းဝေးခဲ့ပေမယ့်၊ဂိုချုပ်ထောင်ကြီးပြောသလို နောင်အနှစ် ၂၀မှာ
တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ဖို့ ဥယျာဉ်မူးတွေကြိုးစားကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
ကံကောင်းလို့ နောင်ဘ၀ မကူးသေးရင်အဲဒီချိန်မှာ ပီတိဖြာလိုက်ချင်ပါရဲ့”
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုရလိုက်လို့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဥယျာဉ်မူး
ကြီးတွေကောင်းလို့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ရေခံ၊မြေခံကောင်းတဲ့ရွှေပြည်ကြီးမှာ
စာကိုး။ ။ဒီနေ့စောစောစီးစီး ကြွက်စုတ်များစစ်ခံထိလို့ စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးလေးနဲ့ရော
ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာနေဇင်လတ်၏သုတစာသားကို ကျွန်မအမြင် ကျွန်မရူ့ဒေါင့်ကနေ
ချပြထားတာဖြစ်လို့ စာဖတ်သူနှင့်အမြင်ချင်းမတူနိုင်ခဲ့ရင်ဖြင့် ၀န္တာမိပါ။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 2:09 AM5comments: Links to this post
တွေကအရိပ်ကလေးတစ်ခုလိုပါပဲ။ အတိတ်ဆိုတာ ပစ္စုန်ပ္ပာန်တို့ရဲ့ခြေရာလို့ ကဗျာတွေကျူးရင့်ခဲ့ကြသလို ထိုအတိတ်ကိုခြေရာကောက်လို့မရနိုင်တော့ပေမယ့်အမှတ်တရအဖြစ်တော့ရှိနေခဲ့ကြတာပါပဲ။
ထိုအထဲက ကိုယ်တိုင်ခေါင်းစဉ်တပ်လို့ မရနိုင်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေး ကျွန်မဘ၀ထဲမှာ ရှိနေဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီနေတော့တိုက်ဆိုင်မူ့လို့ပဲပြောရမလား.. ခေတ်ဟောင်းတေးသီချင်းတွေကြိူက်တဲ့ အမ
“ချစ်ရက်ရှည်ရှည်အင်းလျားမြေ”သီချင်းကို အကြိုက်ဖွင့်ပြီးငြိမ့်နေတာပေါ့။ ကျွန်မကခေတ်ဟောင်းတေးသီချင်းတွေကို
တသီးတသန့်ကြီး နားမထောင်ဖြစ်ပေမယ့် ဖွင့်မဲ့သူရှိရင်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မက ရက်(ပ်)ပါသမား စိတ်လိုလက်ရပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရက်(ပ်)ရက်ပါ
သီချင်းတွေကို နားထောင်ရတာလည်း ကြိုက်နှစ်သက်သူ။
ဒါနဲ့ လွမ်းမိုးရဲ့ “ချစ်ရက်ရှည်ရှည် အင်းလျားမြေ” ဆီက “ကျောင်းဖွင့်ချိန် စိန်ပန်းတွေလည်း
~~~~မြေမှာကျဲပြန့်နေ ကံ့ကော်ပန်းတွေနဲ့အတူ သူနဲ့တွေ့ရာနယ်မြေ~~~~~တက္ကသိုလ်
သို့မဟုတ် မြကျွန်းသာ အင်းလျားကန်မြေ”
ထိုသီချင်းသံနှင့်အတူ ကျွန်မလည်းမျောပါသွားတော့တယ်။သီချင်းနှင့်အတူ အတိတ်ဆီက အမှတ်တရအရိပ်တို့သည်ကျွန်မရင်ထဲသို့တိုးဝင်နိုးစွနေလေတော့တယ်။
သူနဲ့တွေ့ရာနယ်မြေ တက္ကသိုလ်မြေဆီက ကျွန်မတိတ်တိတ်လေးကြိတ်ကြွေနေခဲ့ရဖူးတဲ့သူ့ကို
ကျွန်မတို့တွေရဲ့တက္ကသိုလ်နယ်မြေက မကွေးမြို့တော်တက္ကသိုလ် အညာသူ၊အညာသား
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစည်းကားဆုံးမြို့တော်စာရင်းမ၀င်ဖြစ်ပေမယ့် မကွေးမြို့တော်ဟာ
စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ ရှောင်ရင်လုံးဝမလွတ်နိုင်ဘူး။ ကျောင်းတွေပိတ်ရင်တော့ဖြင့်
(ယခုတော့ စည်ကားနေပြီးလား မပြောတတ်)။
ကျွန်မတို့နယ်ကနေ မကွေးမြို့ဆီကားစီးရင် အနည်းငယ်အလှမ်းဝေးတာမို့ ညနေစောင်းမှ
မြို့ထဲရောက်တယ်။ တက္ကသိုလ်အရိပ်ကို ခိုလှုံဖို့ ကျွန်မတို့ကျေးတောသူ၊ကျေးတောသား
ကျေးတောသူ၊ကျေးတောသားတွေပီပီ အဆောင်ကို ကြိုတင် ဘိုကင်ချိတ်မထားရလေတော့။
မြို့ပေါ်ရောက်တယ်ဆို အဆောင်ကမရ ဒါနဲ့ ခုနှစ်ယောက်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ကျေးတောသား
ကျွန်မတို့ ကျေးတောသူလေးယောက်ကတော့ မေတ္တာဆောင်ရှေ့မှာသူတို့ပြန်အလာကို
ဒီလိုနဲ့ အဆောင်ရှင်အဒေါ်ကြီးက ကျွန်မတို့ကျေးတောသူလေးယောက်ကို သနား၍လား၊
သူတွက်ခြေကိုက်အောင်ပဲလားမပြောတတ် နေရာစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်း
ခေါ်နေတော့ကျွန်မတို့လည်း မတတ်သာတဲ့အဆုံး မိုးကချုပ်နေပြီဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း၊ အိမ်ရှာထွက်သွားတဲ့ကျေးတောသားသုံးယောက်ကလည်းပေါ်မလာသေး အဆောင်ရှင်
အဒေါ်ကြီး ချပေးတဲ့နေရာလေးမှာပဲ ပါလာတဲ့အထုပ်လေးတွေကိုနေရာချနေတုန်းမှာပင်
ဟိုသူကကျော်သွားလိုက်၊ဒီလူကတက်နင်းသွားလိုက်နဲ့ ကျွန်မလည်း အဆောင်
နေရာမရတာရယ်၊ ခရီးပန်းတာတွေပါရောသွားပြီး ဒေါသတို့ ငယ်ထိပ်ဆီအလိပ်လိုက်တက်
လာတော့တယ်။ ကိုယ့်အထုပ်လေးကို စက်ကနဲပြန်ဆွဲယူရင်း အဆောင်ရှင်အဒေါ်ကြီးကို
ဟန်ဆောင်ကာအပြုံးစွက်လို့ အန်တီရယ် ဒီနေရာမှာတော့မနေပါရစေနဲ့လို့စကားဆိုရင်း
အဆောင်ရှေ့လမ်းမဆီ စောစောဆီကထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာပဲ ကျေးတောသားသုံးယောက်
ကျန်တဲ့ကျေးတောသူ သုံးယောက်ကလည်း မျက်လုံးလေးတွေကလယ်ကလယ်နဲ့ ကျွန်မနောက်က
အဆောင်ရှင်အဒေါ်ကြီးပေးခဲ့သည့် နေရာက လှေကားတက် အဆောင်ကိုကြိုတင်မစီစဉ်ထား
သည့် ကိုယ့်ကိုပဲအပြစ်တင်ရလေမည်လား၊အဆောင်ရှင်အဒေါ်ကြီးကိုပဲ အပြစ်တင်ရလေမည်လား၊ အတော်နှင့်ပေါ်မလာသေးသည့်ကျေးတောသားသုံးယောက်ကိုပဲ
သူတို့မျက်နှာလေးတွေကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပြုံးစစနှင့် “အိမ်ရလာခဲ့ပြီ လုံးချင်းအိမ်တော့မရဘူး
အိမ်ရှင်နှင့်အတူပဲနေရမှာ ဒါပေမယ့် ငါတို့ကိုအပေါ်ထပ်တစ်ခု
ပါတယ်။ ငါတို့ထက်အရင်ရောက်နေတဲ့ ရေနံချောင်းသားကျောင်းသားတစ်ယောက်ရယ်..
ထိုသို့စကားဆိုရင်း ကျေးတားသားသုံးယောက်က ဘယ်လိုလဲဆိုသည့်မျက်နှာပေးနှင့်မေးလာသည့်မို့
တစ်ဆခွဲမက နှစ်ဆဆိုလည်းထိုအချိန်မှာ စဉ်းစားနေဖို့အချိန်မရှိတော့ပြီမို့ သူတို့ငှားထားတဲ့အိမ်ဆီကို သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ငှားလို့ကျွန်မတို့ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။
ထိုအိမ်ကိုရောက်တော့ အတော်ပင်မှောင်နေပြီ အရင်ရောက်နှင့်နေသူရေနံချောင်းသားဆိုသူ
ထိုညကတော့ တစ်နေကုန်အတော်ကို ပင်ပန်းနေသည်မို့ သူ့ကိုပင်ကျေးဇူးစကားမပြောနိုင်။
ညအမှောင်မှာရေနံချောင်းသားဆိုသူ သူ့ကို အသားမဲမဲနှင့်အညာသားလို့ပဲ ကျွန်မကတွက်ဆ
မနက်လင်းတော့ကျွန်မတို့အဖွဲ့အတွက်သူက ကောင်ညှင်းပေါင်းနှင့် လဖ္ဘရည်ဝယ်ထား
ပေးသည်။ သူဝယ်ပေးထားသည့် ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့်လဖ္ဘရည်ကို စားရင်းသောက်ရင်း
နုတ်ဆက်စကားဆိုရင်း အပြင်ကပြန်လာတဲ့သူ့ကိုကြည့်မိချိန်မှာတော့ ကျွန်မသူ့ကို
ညဦးဆီက သူ့ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုကျွန်မကောက်ချက်ချထားသည်နှင့် တက်တက်စင်အောင်လွဲ
ထိုနေ့မှာပင် ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်မတို့ယူထားသည့်ဘာသာရပ် မေဂျာက သူနှင့်အတူပဲမို့ သူတက်သည့်ဝိုင်းကျူရှင်မှာပင်
ဘယ်သွားသွား၊ဘယ်လာလာကျွန်မတို့ကျေးတောသူအဖွဲ့နှင့် သူက အဖွဲ့ညီသည်။
ထိုအဖွဲ့မှာ ကျွန်မကအများနှင့်မတူ တစ်မူထူးသည့်ကျေးတောသူအားလုံးထဲမှာဆရာလုပ်လိုက်ရမှ
ကျေနပ်သူ ။ ထိုသို့ဆရာလုပ်တတ်သူကျွန်မကို သူငယ်ချင်းတွေကအမြင်ကတ်ပုဒ်မနှင့်
ကျွန်မတို့အဖွဲ့မှာ အစအနောက်သန်လွန်းသလို ရယ်စရာဟာသတို့ကိုဒြပ်တူနာမ်တူကျအောင်
“ တီရှယ်ကလည်း ရယ်နေတယ်လေ” ဟု ကျွန်မရဲ့အမူအယာကိုကြည့်ရင်း ထိုခါကျမှ
သဘောကျစွါ တခိခိရယ်လေသည်။ ထို့ထက်မပိုခဲ့သိမ်မွေ့လှသည့် သူရဲ့အပြုံးစိစိတို့ကို
တစ်ချက်..တစ်ချက်သူ့အကြည့်တို့နှင့်ဆုံလာတိုင်း တိုက်ဆိုင်မူ့လား သူရဲ့ဂရုတစိုက်
အကြည့်လား ကျွန်မမခွဲခြားတတ်ခဲ့ပေမယ့် အညိုရောင်သူရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေဟာ
တယောက်နှင့်သူလိုက်စနေခဲ့သည်။ တစ်လမ်းလုံးစလာခဲ့သည့်သူ့ကို ကျွန်မစကား
ကိုပင် ကျွန်မလက်မခံခဲ့။ သူနှင့်ဝေးဝေးမှာ ကျွန်မအတတ်နိုင်းဆုံးရှောင်နေဖြစ်ခဲ့သည်။
အရင်ကပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့သော ကျွန်မတို့အဖွဲ့မှာလေးမှာ အရင်လိုဆူညံဆူညံ
လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးကြား ရန်ပွဲလေးကို ရင်ကြားစေ့နိုင်ဖို့ သူငယ်ချင်းတွေဖြောင့်ဖျ
ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။ ဘုရားကိုစက်ဘီးနှင့် သွားမှာမို့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့်သူစောစီးစွါတိုင်ပင်
ထားပုံရသည်။ ဘုရားသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်မရှေ့ကို စက်ဘီးလေးထိုးရပ်ရင်း
“တီရှယ်ဒီနေ့တော့ ကျနော့်စက်ဘီးမှာစီးပါ။ တောင်းပန်တယ်နှော်”
ဆိုသည့်သူ့ရဲ့ပြုံးစိစိ ကြည့်လဲ့လဲ့မျက်ဝန်းလေးအောက်မှာ ကျွန်မမာနလေးယိုင်လဲလို့
ယခုလို စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ကားတွေခြေချင်းလိမ်ရှုပ်နေသည့် မကွေးမြို့တော်လိုနေရာမျိုးမှာ
ကျွန်မတို့ပြန်တဲ့နေ့မှာတော့ ကားဂိတ်ထိသူလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုနေ့မှာတော့ကျွန်မလက်ထဲကို သူစာလေးတစ်စောင်ထည့်ပေးသွားခဲ့ပြီး ကျွန်မတို့ပြန်သည်အထိစောင့်မနေတော့ပဲ စက်ဘီးကိုနင်းကာချာကနဲလှည့်ထွက်သွားတော့တယ်။
ကျွန်မတို့နယ်ဆီ့ပြန်မဲ့ အိမ်အပြန်ကားပေါ်မှာပဲ သူပေးခဲ့သည့်စာလေးကိုဖောက်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
“ တီရှယ် ကျွန်တော့်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ပဲ အရင်ဦးဆုံးတောင်းပန်ပါရစေ။
ပေမယ့်ပြောမထွက်ခဲ့ဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတစ်ခါမှ တည်ရှိမနေခဲ့ဘူးတဲ့ ခံစားမူ့
မျိုးနဲ့တီရှယ်ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဒီစကားတွေကို မပြောဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ရင်ထဲကခံစားမူ့ကို တီရှယ်သိသွားစေချင်တယ်” ကျွန်မပြီးဆုံးအောင်ပင်မဖတ်နိုင်ဲစာရွက်ကလေးကိုကပျာကယာပြန်ခေါက်ရင်း ကားစတင်
သူနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး ကျွန်မရင်ညွန့်ဆီက ပူနွေးလှိုက်ဖိုလို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေး
ကျွန်မအတွက်အမှတ်တရဆိုတာ ခုလိုတိုက်ဆိုင်မူ့တွေနှင့်ကြုံလာတိုင်း သတိရလို့
Posted by ခိုင်နုငယ် at 1:00 AM 8 comments: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 12:17 AM 8 comments: Links to this post
ခုတလော ကျွန်မ ခဏခဏ အမေးခံနေရတဲ့ မေးခွန်းလေး ရှိပါတယ်။ အဲတာ ဘာလဲဆို............. .ကျမ blog title (စာရေးသူ) နာမ်မည်နဲ့ email နစ်နိမ်းက အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်း၊ စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းတွေက ဘာကြောင့်
ဒီ နာမ်မည်တွေကို ရွေးခဲ့တာ လဲပေါ့နှော်။ ကျွန်မ emailနစ်နိမ်းက ဘုတ်ဆုံ ဖြစ်နေပြီး ဘလောပ့် နစ်နိမ်း (စာရေး သူနာမ်မည်) က ခိုင်နုငယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့် ပေးတာလဲဆိုတော့။ ကျွန်မလည်း လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ဖြေခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ခိုင်နုငယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့် ပေးတာလဲ ကျွန်မ ကြိုက်နှစ် သက်လို့၊ ဘုတ်ဆုံ လို့ ဒီနာမ်မည်ကို ဘာ ကြောင့် ရွေးတာလဲ ကျွန်မ နှစ်သက်လို့ ဆိုတဲ့အဖြေက လွယ်လင့်တကူပဲဖြေခဲ့ပေမယ့်။
ကျွန်မ အဖြေကို သေချာစွာ ပြန်စဉ်စားကြည့်မိတယ်။ ဒါနဲ့ စဉ်းစားရင်းနဲ့ အတွေးလေး ၀င်လာမိတယ် ဘုတ်ဆုံ ဒီနာမ်မည်က ဘာကြောင့် ကျွန်မ နှစ်သက်တာလဲ....ဘုတ်ဆုံ ဆိုတော့တစ်ချို့အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်းတွေက မေး ကြပါတယ်။ ၀တုတ်ကြီးလားပေါ့နှော်။ တကယ်တော ကျွန်မ အရမ်းဝလွန်သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ .ကျွန်မအမရင်း တစ်ယောက်လို ချစ်ခင် လေးစား ခဲ့ရတဲ့ အမက ချစ်စနိုးနဲ့ ဘုတ်ဆုံ လို့ခေါ်ခဲ့တော့။ ကျွန်မ သူ့ ပေးတဲ့ နာမ်မည် လေးကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အနေတဲ့ကျွန်မကိုယ့် ကို ကို ဘုတ်ဆုံ လို့နှစ်သက်စွါ သုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ခိုင်နုငယ်ဒီနာမ်မည်ကို ကျွန်မ ဘာကြောင့် နှစ်သက် ဖြစ်သွားသလဲဆို ကျွန်မ အယူအဆ ပေါ့နှော် ဒီနာမ်မည် လေးက ကျွန်မ စိတ်ထဲမှာကို ရှူ့မြင်ရသူအတွက် ရောကျွန်မအနေနဲ့ရော အေးချမ်းတယ် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ နေတယ်၊ နုညံ့ သိမ်မွေ့ နေတယ အဲဒီလို အမျိုးမျိုးသော ပီတိတွေနဲ့ ကျွန်မ ကိုယ့်ကို ကို ခိုင်နုငယ် ဆိုပြီး ခံယူပြစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန် မသေချာစွာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ် ဒီ ခိုင်နုငယ်ဆိုတဲ့ နာမ်မည်က အေးချမ်းတယ်
သိမ်မွေ့တယ်၊နုညံ့တယ် ဆိုပြီးကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့စိတ်ဓါတ်နေထိုင်မူ့ နုညံ့သိမ်မွေ့ရဲ့ လားအေးချမ်းမူ့ ရှိရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကို ကို ပြန်မေးကြည့်မိတယ်။ အဖြေမရခင် လမ်းတ၀က်မှာပဲ ကျွန်မကိုယ့်ကို ကို သရော်ပြုံး ပြုံးမိ သွားသလား မသိ အသွေးအသားတို့ ထူကနဲပူကနဲ ဖြစ်သွားမိတယ်။ကိုယ့်ကို ကို ကျွန်မ တကယ် နုညံ့ သိမ် မွေ့ မူ့ရှိရဲ့လားလို့မေးကြည့်တော့ ကျွန်မ နုညံ့ သိမ်မွေ့စွာ ရှိမနေတာပဲ စိတ်တိုစရာရှိရင်စိတ်ဖြင့် မတိုရသေးဘူး ဒေါသက ရှေ့ရောက်နေတတ်တဲ့ ကျွန်မ ဘယ်မှာလာလို့ အေးချမ်းမလဲ။ စကားပြောရင် မိန်းမ ပီပီသသ ညင်သာ စွာဘယ်တော့မှ မပြောတတ်ဘူး ကျွန်မ အမှန်တကယ် လက်တွေ့ သုံးနေတာက စကားပြောရင် ယောကျာ်းလေး ဆန်ဆန် ပြောတတ်တာပဲ ဘယ်မှာ လာလို့ ကျွန်မ နုညံ့ညင်သာ နေတော့မလဲ။
ကျွန်မတို့ လူတွေ နာမ်မည်ပေး ကင်ပွန်းတပ်ကြတဲ့ အခါ ငွေတွေ သိန်းနဲ့ သောင်းနဲ့ ချီပြီး နာမ်မည်ရွေး ခဲ့ကြတာ ရှိပါတယ်။ ပည့်ညတ် သွားရာ ဓါတ်သတ်ပါ ဆိုပြီး နာမ်ဆိုတာမြင့်မှ လူနေမူ့ လည်းမြင့်မယ်ဆိုပြီး နာမ်မည် ကင်ပွန်း တပ်ကြတဲ့ခါ ဗေဒင်ဆရာတွေဆီ ငွေသောင်းဂဏန်း ထောင်ဂဏန်းနဲ့ချီပြီး နာမ်မည် ရွေးခဲ့ကြပါတယ်။ (ချွင်းချက် ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေ ပေါ့လေ) နာမ်မည်ကောင်းကို ရွေးနေရုံနဲ့ နာမ်မည်ကောင်းတစ်ခုရလာမှာမဟုတ် ပါဘူး။ မိမိတစ်ဦးတည်း ရပ်တည်ဖို့ပဲ နာမ်မည်ကောင်းရွေး နေရင်တော့ နာမ်မည်ကောင်း ရမလားပဲ။ နာမ်မည် ဆိုးရလာမှာကတော့ ဧကန်မလွဲပါပဲ။ “အတ္တ ပရ” မညီညွတ်ပဲ “အတ္တ အတ္တ တွေသိပ်များ နေရင်တော့ နာမ်မည် ကောင်းတွေ ထွက်မလာပဲ နာမ်မည်ဆိုးနဲ့သာ သမိုင်းမှာ မော်ကွန်းတင်ခံရမှာကလည်း ဧကန်မလွဲပါပဲ။
ကျွန်မ ဆိုလိုတာက “ပရ ပရ” တွေချည်းလုပ်နေကြရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။“အတ္တ ပရ”ညီညွတ်မျှတစွာ ရှိနေစေချင်တာပါ။မိမိ နာမ်မည် ကောင်းရဖို့ မိမိတစ်ဦးတည်း ရပ်တည်ဖို့ မိမိနာမ်မည်ကြီး အဒွန့်ရှည် တည်တံ့ ခိုင်မြဲဖို့ ဗေဒင်မေး ယတြာတွေယူ၊ ဘုရားတည်၊ ကျောင်းဆောက်၊ အလှူဒါနတွေ ပြုမယ်။ ဒါဟာ လှူနေတဲ့ချိန်မှာ ကုသိုလ် စိတ်ဖြစ်ရင်တော့ အခိုက်အတန့်တော့ ကုသိုလ်ရချင်လည်းရမယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီကုသိုလ်ထဲမှာ “အတ္တ အတ္တ” တွေများနေရင်တော့ ကုသိုလ် စိတ်ကော ဖြစ်နိုင်ပါအုံးမလား။ ထို့အတူ မိမိနာမ်မည်ကောင်း လိုချင်တဲ့ မိမိနာမ်မည်ကြီးရော အဒွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ နေနိုင်ပါ့မလား။ နာမ်မည်ကောင်း ဆိုတာ ရွေးယူလို့တော့မရပါဘူး။ နာမ်မည်ကောင်းတစ်ခုရဖို့ ကိုယ်ကိုတိုင် အများပြည်သူအတွက်၊ မိမိအတွက် “အတ္တ ပရ” ညီညွတ် မျှတစွါရှိနေမှသာလျှင် ဒီနာမ်မည်ကောင်းဟာ လောကမှာ လှပစွာ ရပ်တည် နေနိုင်မှာပါ။
အများပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့ လူမူ့ရေး၊ နိုင်ငံ့အရေး “ပရ စိတ်ဓါတ်” နဲ့ ရပ်တည်ပေး နေခဲ့ကြတဲ့ နာမ်မည်ကောင်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ရှိကြပါတယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် တွေလို ကျွန်မ ကင်ပွန်းတပ် မင်္ဂလာပြုခဲ့သော နာမ်မည်က နာမ်မည်ကောင်း တစ်ခုနဲ့ “အတ္တ ပရ” ညီညွတ် မျှတစွာ ရပ်တည်နိုင်နေပါ့မလား။
ယခု ကျွန်မ(စာရေးသူ) ခိုင်နုငယ်နာမ်မည်နဲ့ မတစ်တောက် တစ်ခေါက် ရေးနေခဲ့တဲ့ စာပေတို့သည် စာဖတ်သူ အတွက်………
“အို မိတ်ဆွေ..... ငါ့စာဖတ်၍၊ မမြတ်တိုင်စေ မရှုံးစေသား၊ ပျင်းပြေနှစ်ခြိုက် တွေးဖွယ်ထိုက်ရာ၊ တစ်ပိုဒ်တစ်လေ တွေ့ငြားပေမူ၊ စာပေကျေးကျွန် ငါ့ဝတ်ပွန်ပြီ၊ ငါ့မွန်အမြတ် ငါ့အတတ်ဟု၊ စာဖတ်သူ့ ပေါ် ခေါင်းကို ကျော်၍၊ ငါသော်ဆရာ မလုပ်ပါတည်း။” ဆိုသည့် တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် ရေးသား စပ်ဆိုခဲ့သည့် စာကဗျာလေးထဲကလို
ပျင်းပြေ နှစ်ခြိုက် တွေးထိုက်ဖွယ်ရာပါနိုင်ပါ့မလား။ ငါ့ဘလောပ့် စာမျက်နှာ ငါရေးချင်တာတွေ ရေးနေမိတဲ့ စာရေးသူလား၊ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူအတွက် ပျင်းပြေ နှစ်ခြိုက် တွေးထိုက် ဖွယ်ရာ တစ်ပိုဒ့်တစ်လေ ပါအောင်
“ပရ” စိတ်ဓါတ်နဲ့ ရေးနေမိတဲ့ စာရေးသူလား။ ဆိုသည့် မေးခွန်းတွေနှင့် အတူ အတွေးပွါးလို့ ဆင်ခြင်မိရင်း ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ကင်ပွန်းတပ် မင်္ဂလာပြုခဲ့သော စာရေးသူ ခိုင်နုငယ် နာမ်မည်နဲ့ “အတ္တ ပရ” ညီညွတ် မျှတစွာ စာပေတွေကို ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအုံးမယ်လို့ ဆန္ဒပြုရင်းလိုက်ရပါတော့တယ်။
Posted by ခိုင်နုငယ် at 2:11 AM5comments: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 9:50 PM4comments: Links to this post
အဲဒီ အဖြူရောင်တိမ်ဆိုင် တိမ်လှိုင်းလေးတွေ
မောင့် ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေပြယ်လွင့်သွားမှာလား? ♥
မောင့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေပြယ်လွင့်သွားမှာလား? ♥
မောင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေပြယ်လွင့်သွားမှာလား? ♥
:) :) အဖိုးက.......အဖွားနုငယ်ကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်။:) :)
Posted by ခိုင်နုငယ် at 11:34 PM9comments: Links to this post
အသွားငင် အပြန်ငင် ခြေလျှင်ပေါက်ခရီး
မေ ကောက်သည့်ပေါင်း တောင်းနှင့်ပြန်ချီ
နေအကျမှာ မေ့အလှက ကလူကျီ….။
အိမ်နောက်မှာ ဘူးစင် အိမ်ခြေမှာ ခ၀ဲ
ခေါင်းရင်းက သြဇါ တောရွာမို့ ရောဂါကင်းတယ်
ပန်းရနံ့စွတ်စိုထိုင်း မေ သိုင်းတဲ့ပ၀ါနီ
ပန်းလေလည်း လိပ်ပြာခြယ် တွဲလက်တွေလည်း
ချိတ်ကာကွယ် မောင်နှင့်မေ သစ္စာဆို
Posted by ခိုင်နုငယ် at 12:50 AM3comments: Links to this post
ဘလောပ့်ဟော့ပေါ့လေးဖွင့်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ အရင်ကတော့ ဒီနေရာလေးမှာကဖေးcafé shop
ရက်အကန့်အသတ်မရှိကိုိသိမ်းသွားတာ ဒါနဲ့ကျမလည်း ဆိုင်လေးအပိတ်ခံလိုက်
ရကတည်းက..စားမပျော်၊အိပ်မပျော်နဲ့ ပြန်ရလိမ့်နိုးနိုးနဲ့စောင့်မျှော်နေတာ ပြန်မရတော့။
အိမ်မှာလည်းအိမ်မှာမို့၊အလုပ်မှာလည်း အလုပ်မှာမို့ "ကွန်ပြူတာထဲခေါင်းဝင်ပြီးဘာတွေရှုပ်နေတာလဲတဲ့
" မပြောချင်ဘူး ကြည့်နေ ကြည့်ထိုင်တဲ့ ကျမလည်းတွေးလိုက်မိတယ်။သူတောင်အမြင်ကတ်စရာဖြစ်လာပြီ။
အကြီးတို့ဝဇီအတိုင်း သူကငြိမ်နေပြန်တော့ ထပ်ပွါးနေပြန်ရော
"အရေမရ၊အဖတ်မရတွေသိပ်လုပ်တာပဲ"တဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ကျမလည်းငြိမ်မနေနိုင်တော့
လုပ်သလိုမဖြစ်ရင် ဖြစ်သလိုလုပ်မယ်ဆိုတာထက် မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်မိတာ ကျမ၀ါသနာမို့
Posted by ခိုင်နုငယ် at 2:10 AM3comments: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 1:26 AM 1 comment: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 1:01 AM No comments: Links to this post
Posted by ခိုင်နုငယ် at 12:49 AM 1 comment: Links to this post